X-Plane Enyemaka 3 afọ 6 ọnwa gara aga #20
Ọ bụrụ na ị nwee nsogbu, njehie ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nwere ụfọdụ ajụjụ banyere X-Plane Simulator, biputere ya ebe a. Gwaziekwara anyị banyere ndozi na azịza maka nsogbu dị iche iche na njehie dị na X-Plane.
X-Plane Enyemaka 2 afọ 2 ọnwa gara aga #1062
Na-achọ ihe ọ bụla x-plane egwuregwu
X-Plane Enyemaka 9 ọnwa 4 ụbọchị ago #1503
Dariussssss dere: Ọ bụrụ na ị nwee nsogbu, njehie ma ọ bụ vtc orly ị ụfọdụ ajụjụ banyere X-Plane Simulator, biputere ya ebe a. Gwaziekwara anyị banyere ndozi na azịza maka nsogbu dị iche iche na njehie dị na X-Plane.
Nke a bụ oge mbụ m ebe a ma achọrọ m ịsị na obi dị m ụtọ na m bịara ebe a na ịkekọrịta echiche m.
X-Plane Enyemaka 2 ọnwa 4 izu gara aga #1754
Ndewo. Azụrụ m X Plane 11 ma nwalee ịwụnye ya. Diski 1 enyeghị m nsogbu ọ bụla, wee disk 2 gosipụtara njehie, yabụ m kpebiri iwepụ ya. Amalitere m itinye nrụnye ọzọ na enweghị nsogbu ọ bụla til m gaa disk 3; Agwara m ya ọzọ ma nwaa ikwugharị usoro onyunyo gara aga, mana oge a, laptọọpụ m anaghị achọpụta mkpụrụ ego ọ bụla mgbe m tinyere ya.
Amaara m na ọ dịghị ihe jikọrọ diski ahụ n'ihi na ejiriwo m diski abụọ dị iche iche; eji ya na ika ohuru.
Ana m eji windo 7.
Emeghachikwara m sistemụ m, mana ọ dị mwute ikwu na mweghachi ikpeazụ nke m nwere bụ nke dị mgbe ihe a mechara, budata; Direct x 11 na ihe ọ bụla.
Onwere onye ga enyere m aka?
Oge ike page: 0.209 sekọnd